Substrate yezityalo ze-aquarium | Ngeentlanzi
Las Izityalo zasemanzini zingaphezulu kwento nje yokuhombisa. Zizinto eziphilayo kwaye ngenxa yoko zifuna ukhathalelo kunye neemeko ezithile zolondolozo kuphuhliso lwazo. Ngaphakathi kuyo i-substrate idlala indima ebalulekileyo kuphuhliso olufanelekileyo kunye nolungelelwaniso lwebhayiloji elungileyo ye-aquarium.
Izityalo zendalo ziyafuna micro kunye neemacronutrients ukukhula kakuhle. Kwi-substrates hlalisa iikholoni zebhaktheriya ezijongene nokuguqulwa kwe-nitrite kwi-nitrate kunye neyokugqibela ibe yingozi ye-nitrogen gesi.
Los Imicweceko ihlelwe ngokobungakanani, umbala, ubume kunye nokwenziwa kweekhemikhali. Ukusuka apho sifumana intlenga yentlabathi, udongwe kunye neentlabathi ezintle kwaye ezo ziyatyeba zihamba zisuka entlabathini ziye kwiigrabile. Iitshani zibalulekile kuba zikhuthaza ukujikeleza kwamanzi kwaye ziqinisekisa isiseko esisempilweni esingenayo imethane kunye nehydrogen sulfide ngenxa yegrabile ezihlanganisiweyo.
Ubungakanani obuchanekileyo nobuchanekileyo bobona buvumela ukuhamba kwamanzi kancinci kodwa okuqhubekayo kuphuhliso oluchanekileyo lwendawo eyi- iingcambu zezityalo. Ezona zifanelekileyo zezi zihlelwe njengentlabathi erhabaxa, ukusukela kwimilimitha enye ukutyeba, kunye negrabile phakathi kwe-3 kunye ne-5 mm ebonakalisiweyo. Kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba ii-substrates ze-calcareous ezityebile kwi-calcium ziya kuthintelwa kwi-aquariums eneemfuno zamanzi athambileyo kunye ne-asidi. Endaweni yokuba ziluncedo kwiitanki zamanzi ezilukhuni kunye nealkali.
Ngokumalunga nevolumu, nangona kungekho mithetho iqingqiweyo, kufanelekile ukuba oku sukuba nzulu kakhulu, phakathi kwe-8 kunye ne-10 cm ngaphambili kwetanki kunye ne-15 okanye i-20 ngasemva. Ukuba sikhetha ukubeka intambo yokufudumeza ngasemva, kuyinto eqhelekileyo ukuyibeka ngqo kwiglasi yesiseko. Ngokubhekisele kumbala, ngokobuhle obulandelwa yi-aquarium kunye nentlanzi. Kwaye ayisoze loo nto ingaphantsi ineefom zobundlongondlongo okanye ezibukhali njengelitye lentaba-mlilo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izityalo ze-Aquarium » Substrate yezityalo ze-aquarium